यात्राका ........सुस्केराहरु: 2011
न आबेगमा थिएँ न त रिसमा थिएँ
आफ्नै मुद्दा आफैं न्यायाधिशमा थिएँ
डायरी अनि दैनिकीले यही भने
धेरै चोटी सुध्रिने कोशिसमा थिएँ
खोज्न आएथे रे घाम चर्किएपछि
म शीत जीबित झिसमिसमा थिएँ
म पानी यसरी अब पानी रहिन
थोरै अमृतमा थोरै बिषमा थिएँ
मेरो पागलपनले , थर्काउँछ मलाई
तँ को होस् म हुँ जो हर मानिसमा थिएँ
Posted by दिनेश राज at 08:25
तिम्रो माग पूरा यो भएहुन्थ्यो ।
फेरि तिमी को म को भएहुन्थ्यो ।
संसारमा दैव छ तिम्ले भन्यौ,
हाँस्दै मैले भने हो भएहुन्थ्यो ।
काट्न दशा जन्तर किन्दै सोच्छु ।
कतै केही त चोखो भएहुन्थ्यो ।
छोड यार सक्दैनौ मनाउन ।
उनै हुनुपर्छ जो भएहुन्थ्यो ।
बारी-बारी हाँस्दैछन लालुपाते ।
यति थाहा भएको भएहुन्थ्यो ।
Posted by दिनेश राज at 08:21
माया ब्यापार हुनुपर्छ, छानी –छानी भएको छ ।
यो लेख्दा दिनेश लाजले पानी-पानी भएको छ ।
जहाँ तरबार तेर्सिएथ्यो ,त्यहीं राखें खुट्टा आफ्नो ।
माफी कस्लाई यहाँ गल्ती जानी –जानी भएको छ ।
तिम्रा गजल चुप रहे , अनि उस्को गला पनि ।
हाहा भाषण यहाँ लेघ्रो तानी –तानी भएको छ ।
आज लाडिन्छु केही छिन , आमा तिमी भन फेरि ।
कैले है ठूली-ठूली कैले सानी-सानी भएको छ ।
आँखा चिम्लेर हेर्छु जब ,चाहेझैं छ यो संसार
ढुङगा पनि त देवता ठानी –ठानी भएको छ ।
तमाशा हेर्न पर्खिबसें , बगरमा दिल छोडेर ।
किन तुफान अब चाहिं, ज्ञानी –ज्ञानी भएको छ ।
Posted by दिनेश राज at 02:18
मेरो आफ्नै आकाश हुनुपर्छ आजबाट ।
केही कुरा त खास हुनुपर्छ आजबाट ।
हराएथ्यो जिन्दगी बालुवामा पानीजस्तै ।
म हुनुको आभाष हुनुपर्छ आजबाट ।
दैब तेरो भरमा पाखुरीले छोड्यो धर्म ।
थोरै देबत्व नास हुनुपर्छ आजबाट ।
बल छल मा नझुकेको सत्य-तथ्य लेखिएको ।
नबीन ईतिहास हुनुपर्छ आजबाट ।
जे-जे बित्यो सकियो आऊ अब यस्तो सोचौं ।
काँडासँग सुवास हुनुपर्छ आजबाट
Posted by दिनेश राज at 00:03
जिन्दगी अझै मेरो जुवा खालमा छ ।
लौ एउटा मुहार ऊ हेर झ्यालमा छ ।
आधारले यही एउटा रैछौं जोडिएको !
म आफ्नै तालमा छु ऊ आफ्नै तालमा छ ।
कसैले सोध्नै छोडे हालखबर अनि ।
चिन्दछ सबैलाई जो बेहालमा छ ।
तागत कहाँ जोख्ने छ र दिनेशमा ?
आकाशमा को छ र को पातालमा छ
Posted by दिनेश राज at 19:00
नसुनाउनू कसैलाई कथा यसो गर्नू क्या !
सिकाउँछन नत्र त्यसो गर्नु क्या यसो गर्नू क्या !!
भुँई खुट्टाले कोट्याउनु कतै कि टोक्नु औंला ।
बाँकी आँखा-आँखाले गर्नु कुरा यसो गर्नू क्या !!
भोलि पिर्छ आफैंलाई शंका लाग्छ भने यदी ।
कतै नगर्नु कसैसँग आशा यसो गर्नू क्या !!
बुझ्नुमा एउटा जलन हो यस्तै लाग्छ भने !
दिनेश जस्तै बनिदिनु बच्चा यसो गर्नू क्या !!
Posted by दिनेश राज at 03:08
मीठो मुस्कान सँगै ढाडमा हुलाकीको धाप आयो ।
चिठ्ठी हातमा आयो मुखमा बाफ रे बाफ आयो ।
एक जमाना भयो दुश्मनी भएको भाग्य सँग ।
बुझ्छु म पनि तिम्रो नाममा कस्को जवाफ आयो ।
धर्म समाज पाप समय बाध्यता रीतिथिति ।
प्रश्न एउटा थियो उत्तर यसरी लाख आयो ।।
याद आउँछ जब लाहुरे छोरा आकाश हेर्दै ।
मेरी आमा भन्छिन आयो हवाइजहाज आयो ।
Posted by दिनेश राज at 00:52
बाद कतै नयाँ कतै पुराना चाहियो ।।
उँधो बग्नलाई के को बहाना चाहियो
लेखिएको थियो दया माया धर्म दान ॥
मेरो पुराणमा च्यातेको पाना चाहियो ॥॥
भातमा केही मान्छेहरु बिकेकाछन् रे ।
आदर्श छोड्देऊ स्वादिष्ट खाना चाहियो ।
आज मान्छेहरु तर्सेका छन् आफैसँग ।
त्यसैले भन्दाहुन नयाँ जमाना चाहियो ।
काखमा आमाको हुँदा सम्झन्छ दिनेश ।
घर बलियो हुन बलियो छाना चाहियो ।
Posted by दिनेश राज at 01:37
घडी धेरै घुम्यो , बिबाद त्यै बुँदाको होला ।
उस्ले ताम्रपत्र , मैले छाती छुँदाको होला ।
साथीले चिठ्ठीमा , लेख्यो मुस्कान मीठो तेरो ।
यार त्यो तस्वीर ,म गाउँमा हुँदाको होला ।
ओहो यो सुस्केरा ,बिलायो खै कता यो निंद ।
पक्कै यो छट्पटी, उता आमा रुँदाको होला ।
मेटिन्न दिनेश ,बस्नुछ यस्लाई तैं सँग ।
दाग सिरानीको , तैंले त्यो मन धुँदाको होला ।
Posted by दिनेश राज at 00:44
कुन्नी के को डरले आवाज छोप्दै　थिएँ ।
उध्रिएका चोलीमा लाज छोप्दै थिएँ ।
जरुरतनै थिएन कोट्याउनु कहिल्यै ।
सँगै बेद ,गायत्री ,नमाज छोप्दै थिएँ ।
केही छन किताब सम्पत्ती मेरा भन्नु ।
पर्दा च्याती झ्यालको दराज छोप्दै थिएँ ।
काँडा बिझ्यो खुट्टामा , त्यसो त त्यो बेला म ।
आकाशमा हातले जहाज छोप्दै थिएँ ।
यस्को अर्थ के थियो ,तिम्लाई लाग्यो होला ।
माटोमाथि माटोले अनाज छोप्दै थिएँ ।
Posted by दिनेश राज at 19:29
ऊ खुशी छ हामीलाई ,छल्न सकेकोमा ।
हाँस्दैछु म खोटो सिक्का ,चल्न सकेकोमा ।
निराशाको के भो कुरो ,भैगो मानी दिऊँ।
दङ्ग छ मुखले चिप्लो , दल्न सकेकोमा ।
चोट लाग्यो गयौ छोडी , खुशी भएँ खुशी ।
पत्थर ठानेको दिल यो , जल्न सकेकोमा ।
Posted by दिनेश राज at 04:51
अझै यो आभाष अध्यारोमा छ ।
जे छ खुशी तिम्रो अंगालोमा छ ।
पाइला पिच्छे हुन्छु अग्लिएको ।
हिड्नुको मजा त उकालोमा छ ।
उज्यालोमै छ तेरो बाँकी सास ।
जस्तो धागो बल्दो दियालोमा छ ।
के भर दिनेश ! तँ , तेरो देश ।
बर्षौं सुनें सुध्रिने पालोमा छ ।
Posted by दिनेश राज at 19:45